Waxaad arki jirtay qiyaano jaceyl oo fashilmatay ama qiso jacayl dhab ah oo qof ku dhacday.
Alla murugo jaceeyl maxaa ibaday.
Weey xanuun badan tahay akhrinta qisooyin jaceyl ah oo murugo leh laakin waa muhiim inaad wax ka ogaato qiyaanada raga ama dumarka ay kula kacaan lamaanahooda.
Qiyaano jaceyl - 5 Calaamadood oo aad ku ogaan karto
Qiyaano jaceyl: Murugo jaceyl maxaa ibaday?
Wax badan waxaa laga yaabaa inaad maqashay „Murugo jaceyl maxaa Ibadan“
qof la qiyaanay misana looga baxay axdigii. Hadaba sidee ku ogaan kartaa qofka ku qiyaanayo?
Inaad qof jaceyl dhab ah kuu qaaday aad qiyaanto waa wax aad xun sababtoo ah adiguba ma jeclaan lahayn in lagu qiyaano.
Waxaad arki jirtay gabdho fara badan oo wiil ka dhex qeylinayo, markii la weydiiyo maxaad ka rabtaa gabadhani waxa uu ku jawaabay. Weey i qiyaantay.
Erayga qiyaano sidiisaba waa wax xun ama qof ku sameey qiyaano jaceyl ama wixiisa ka qiyaaan. Ma ahan ficil la sameeyo. Mustaqbal ahaanne kuuma wanaagsano. Waxaad maqli jirtay:
Dawaco iyo naag sirta iyo qiyaanada weey ku dheereeyaan.
Markeey maahmaahdani dhaheyso naag waa qiyaano badan tahay macnaheedu ma ahan in naagaha oo dhan ay qiyaano badan yihiin balse waxaa jiro dumar daacad ah oo Alle ka cabsi yaqaaano. Hadeey ku rabto weey ku rabtaa, haddii aysan ku rabinna kuma rabto. Sidoo kale Dumarka qaarkood waxaad ku aamini kartaa wax walbaaa.
Maahmaahdani aan kor ku soo xusay waxa ay ku timid gabar Ilaahey u dhaliyay qurux ayaa maalin waxa ay socotay waddo, waxaa ka hor yimid xariif shabeel naagood ah oo qoftii arkaba qoftiisa tahay. Wiilkii ayaa waxa uu gabadhi ka badiyey eegmada, asigoo is leh soo jiido qoftaan.
Gabadhii ayaa waxa ay weydiisay wiilkii: Maxaa iga fiirineysaaa? Wiilkii oo balaayo iska dhigayo ayaa wuxuu ugu jawaabay:
Ma arag weligeey qof kaa qurux badan
Xaas miyaa tahay mise sida aniga oo kale?
Gabadhii oo jawaab siineyso ayaa waxa ay tiri
Hadaad u aragto inaan qurux badanahay waa inaad aragtaa walaasheey oo iga qurux badan misana iga sidato.
Waxa ay soo socotaa gadaasheyda ee fiiri.
Wiilkii: ayaa fiiriyay gadaasheeda, si uu arko cida daba socoto laakin nasiib daro qofna ma arkin oo saaxibkaa meel cidlo ah ayaa loo diray. Wiilkii oo hadalka sii wato ayaa yiri: Cidna ma arko, ee waa qoftee?
Gabadhii ayaa ku tiri wiilkii
Hadaa tahay wiil guur u qalmo, markaad ila kulantay oo aad i aragtay gadaasheyda gabar kale kama fiiriseen, kamana raadiseen.
Markaan ku dhahay gadasheyda fiiri oo waxaa jirto walaasheey iga qurux badan, waxaad igu dhihi lahayd „ Ma jirto cid adiga kaa qurux badan, waan kugu qancay” ee saaxibow cagaha imaqashii, ayaa hadalkii loogu soo gaba gabeeyay.